အယ်ဒီတာများ ထံသို့ . . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » အယ်ဒီတာများ ထံသို့ . . .
Posted by vvpeople on May 5, 2010 in Letter to The Editor | 35 comments
အဒ်မင်အဖွဲ့ခင်ဗျား။ ရတနာပုံ သတင်းစာဟာ ခင်ဗျားတို့ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အဆင့်အတန်း ရှိတဲ့ သတင်းစာ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို စောင့်ထိန်းပေးကြပါ။ အပေါ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ် စော်ကားတဲ့ စာလုံးတွေကို ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းလဲပေးပေမယ့် ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်၊ ဘာသာတရားနဲ့ ယှဉ်တဲ့၊ ထိခိုက်နစ်နာမဲ့ စာလုံးတွေကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ဘူး။ ဒီ ပြသနာတွေကို ခင်ဗျားတို့ပဲ မွှေးခဲ့တာပဲ။ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းစာ တစ်စောင်ဟာ ဒီလို စော်ကားမှုတွေ ကို လက်ခံမှု မပြုသင့်ဘူး။ အစတစ်ယောက်ရေး ကတည်းက ခင်ဗျားတို့ ပယ်ဖျက်သင့်တယ်။ Unapprove လုပ်သင့်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရှိနေတဲ့ လက်ရှိအချိန်ထိ ရပ်တည်နေတဲ့ သတင်းစာကြီးတွေ ဒီလိုအရေးအသားကို လက်မခံကြပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို Media ရဲ့ စည်းကမ်းကို ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာရဲ့လား စမ်းစစ်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ ကောမန့်ကို မဖျက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဖျက်ရင်လည်း ကျွန်တော် Script ဖမ်းထားတယ်။ ပြန်တင်မယ်။ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စော်ကားထားကြတဲ့ ဦးနှောက်မဲ့ လူတန်းစားတွေဟာကို အရင်ဖျက်ပါ။ သူတို့ဟာ ဖျက်လိုက်ရင် ကျွန်တော်လည်း ရပ်ပါ့မယ်။ ဒါ ခင်ဗျားတို့ လုပ်သင့်တဲ့ အရေးကြီး ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ဒါ အဆင့််အတန်းရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုပဲ မီးမွှေးနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ DDos နဲ့ တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတုို့ သိမှာပါ။ DDos ဒဏ်ကို WordPress မခံနိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ မြန်မြန်စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး အကျိုးကို လိုလားပါတယ်။ စစ်အစိုးရလို လူအချင်းချင်း ကုန်းမတိုက်ပေးပါဘူး။ ဒါပါပဲ။
vivacious people has written 1 post in this Website..
View all posts by vvpeople →
မိုက်ရိုင်းတာ ညစ်ညမ်းတာ အသားလွတ်ထိခိုက်စော်ကားတာတွေကိုတော.တားမြစ်သင်.ပါတယ်။
DDos တဲ့လား။ …မသိပေါင်… script ကတော့ကြာပါပြီ သုံးကြတာ…
ငယ်ငယ် ကစိတ်တွေ မမွေး ကြပါနဲ့ ကွယ်
ချိမ်းခြောက်တာတွေပါကုန်ပြီ။ အမေ၇ိကားက မီဒီယာဆိုတာကြီးခမြာသနားစ၇ာ
ko william ပြောတာမှန်တယ် သူကဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ သူကဘာကြီးမို့လို့လဲ နော် လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှားကိုထောက်ပြချင်ရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောတတ်ရတယ် လို့ထင်တယ်ဒါကဘလိုင်းကြီး ခြိမ်း ခြောက်နေတာ စိတ်ဓါတ်ကအောက်တန်းကျတယ် မန်းလေးဂဇတ်ကရပ်တည်လာတာကြာပြီ ခုမှလာအရူးထနေ တာ မှားနေတဲ့အမှားကိုစကားလုံးလှလှလေးရွေးပြီးထောက်ပြပေါ့ ။ ဒီလိုရင့်ရင့်သီးသီးပြောတာဟာ သူ့စိတ်ဓါတ်ကိုဖော်ပြနေတာဘဲ။ ko william အကိုရဲ့ဂျီမေးအကောင့်ကိုသိချင်တယ်။
that paing says:
william ချကွာချ မြောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး ဒါဘလိုင်းကြီး အဲ့လိုကောင် အင်တာနက်ကနေ ကိုလိုချင်တာကိုတောင်ဒေါင်းလော့ တောင်လုပ်တတ်ရဲ့ လားတောင်မသိဘူး။ ဟေ့ကောင် vvpeople မင်းအဲ့လောက်စွမ်းရင် ငါ့အကောင့်ထဲလာခဲ့ ။ငါဒီထဲမှာ မမိုက်ရိုင်းချင်ဘူး။ ငါ့အကောင့်က pyinzatheinka@ ကွ ….။…………………..ပဲကွ။
myanmarchatadmin@gmail.com ur welcome guy. Let play script….u r funny…this is not MIRC server…
Wow..Ayuu long time no see…i am with u Ayuu..
VVpeople arrbyai.blogspot.com ကို Script နဲ့ ဖျက်ပေးပါလားကွာ။ ဟီးဟီး ကို.ဟာကို ဖျက်ရမှာပျင်းလို့
အရူးချီးပန်း အော်မဲ့အစား arrbyai.blogspot.com Blog လေးကို တစ်ခုခုလုပ်ပြပါလားလို့။
အရှိကိုအရှိတိုင်း မန်းလေးဂဇတ်မှာတင်ကြတာဘဲ .. ဒါမှလူတွေကအမှန်ကို အမှန်အတိုင်းသိကြမှာပေါ့ ။ ဘာလဲ …..ကောင်းတာကိုဘဲ တင်ထားရမှာလား သူပြောပုံက အကောင်းနဲ့အ ဆိုး က အမြဲဒွန်တွဲနေတာဘဲ ။ သူမကြိုက်ရင် မ၀င်နဲ့ပေါ့ …။ခြိမ်းခြောက်နေစရာမလိုပါဘူး ။ သူကိုတိုင်ဘဲမိုက်ရိုင်းပြီးဝင်ရေးနေတာ ။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မန်းလေးဂဇတ်ကို အားပေးနေမယ် ။အဲလောက်တော်နေရင်လည်း ကိုယ်စိတ်ကြိုက်သာ webside သာထောင် ထားလိုက်တော့ ……..။ vvpeople နင်ဝင်ပြောမှဘဲ လူတွေစိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်တယ်။။ကိုယ့်ထမင်းကိုစား……။
ဟေ့ကောင် vv people… အရင်ဆုံး ဘောပဲ လို့ပြောလိုက်မယ်…လူများက လက်ခံထားတာကို ခွမတိုက်နဲ့…
ခွတိုက်တာများလို့ ပါးသွားရင် မင်းမျိုးကန်းသွားမှာစိုးလို့ပါ… မင်း သိပ်စွမ်းရင် လာခဲ့လေ… စောက်ရူးတွေ တယောက်မှ မပါဘူး… scarecrow88 က ကောင်းရင် လူများထက်ကောင်းတယ်… မကောင်းရင်တော့ +-xဂ%…
min phin theint yar nae lar… v v people…
min nick ko yae dar daung non kyat tha yae bae…
phin yar nae yin koe phar thar rock nae brush lite…
a dar mha ma hote thae yin…
min theint yar nae thae yin nga cock shi dae…
nae nae dot kyan dae…
golli shi lo kwa… ha ha ha ha….
ဒီနေ့တော့ အားကုသိုလ်များတဲ့နေ့ဘဲ …….။လူတွေကအမှန်ကိုပြောရင်နာတတ်ကြတယ်တဲ့ ။သူကဘယ်သူလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပေါ့ ခူံထဲကနေလက်တီးထောင်ပြနေတာ ။ ပြောပြလိုက်အုံးမယ် မန်းလေးသူတော့မဟုတ်ဘူး မန်းလေးရေနဲ့မန်းလေးလေကိုရူနေတာ ။ အယ်ဒီတာ ဒီကောင်အရူးကောင်ကြောင့် mandalay gazette မပျောက်ပြတ်စေချင်ဘူး ။ သူကကိုယ့်ထမင်းကိုမစားဘဲ ဘယ်သူကျွေးတဲ့ထမင်းစားနေတာလဲမသိဘူး ။ဒီမှာသူများကျွေးတဲ့ထမင်းစားရင် သူများခိုင်းတာလုပ်ရတယ်တဲ့ သူကအဲံလိုနေမှာ ..။တော်နေ တစ်ယောက်နဲ့အများပြောနေတယ်လိုထင်နေအုံးမယ် တစ်ယောက်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ …..။ သူပြောတဲ့စကားတွေကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူး ဟားဖို့ဘဲကောင်းတယ် …….ဟားဟား………
အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာကဏ္ဍဆိုတာ ..ပုံနှိပ်ဖြန့် ဝေတဲ့ ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာမှာ ပုံမှန်ရှိပါတယ်။ အမေရိကတ၀ှမ်းက စာနဲ့၊ဖုန်းနဲ့မေးလာတဲ့သူတွေကို ဖြေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
အခု…၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ မေးသလိုလို၊ အကြံပေးသလိုလိုနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ထားတာဖြစ်နေလည်း ဖြေပါ့မယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးတဲ့စာတွေ၊ ကော်မန့် တွေ (တတ်နိုင်သလောက်) ဖျက်လိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်မထားပါဘူး။
အချက်တွေအများကြီးထဲက တခုက ကော်မန့် တခုရေးတိုင်း ကျပ်၅၀ ရနိုင်ပြီး ဖျက်လိုက်ရင် ကျပ်၁၅၀ ပြန်နှုတ်ဖို့ ဆက်တင်လုပ်ထားတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ တိုင်ကြားစာတော်တော်များများ ရတာမို့ ဖျက်ဖို့ စဉ်းစားပါမယ်။ မန်ဘာများနဲ့စာဖတ်သူများ ဖျက်စေချင်တဲ့ ကော်မန့် တွေကို အမှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လက်မ အထက်ပြနဲ့ အောက်ချ ပုံလေးတွေ့မှာပါ။
အဲဒီမှာ လက်မ အောက်ချ ကိုကလစ်လုပ်ရင် အနှုတ်ဂဏ္ဍန်းပြပါမယ်။ အနှုတ်ဂဏ္ဍန်း ၁၀ခုနဲ့အထက်ရှိသူရဲ့ ကော်မန့် ကို ဖြုတ်ပစ်ပါမယ်။
သတင်းစာ ထုတ်ဝေလာတဲ့ ၄နှစ်ခရီးမှာ အမှုမျိုးစုံ ကြုံရပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ မှာရုံးစိုက်တဲ့သတင်းစာဟာ အမေရိကရဲ့ ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာပါတယ်။ မီဒီယာတခုအနေနဲ့ ဆိုင်ရာ အာမခံယူထားတာအပါအ၀င် ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာ ဌာနများနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။
၀က်ဘ်ဆိုက်ထောင်ထားပြီး မီဒီယာအမည်တပ်ထားတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုတာက တရားဝင်ရပ်တည်နေတဲ့ မီဒီယာကို တရားဝင်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ရင် ဥပဒေကြောင်းအရ အပြစ်ရှိပါတယ်။ သတင်းစာအကြောင်းကို ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay_Gazette
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ အကျိုးအမြတ်မရှိပဲ အမိမြေကဝေးကွာနေသူမြန်မာတွေနဲ့ ပြည်တွင်းနေမြန်မာများ ပေါင်းကူးဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ပေးထားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီအခြေအနေနဲ့ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းလေးကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ပြုပါတယ်ခင်ဗျား..။
အယ်ဒီတာ ဒီလိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ။ Mandalay gazette ကိုလည်းအစဉ်အားပေးနေမှာ ပါ ။ စာတွေတင်ဖို့အတွက်လဲ ကြိုးစားနေပါတယ် ။ ခုမှလေ့လာနေတုန်းပါ။
မိမဆုံးမဖမဆုံးကောင် vvpeople ရေ…သူများတွေကိုနင့်စိတ်နဲ့နှိုင်းမနေနဲ့…မင်းနဲ့တုပြီးမပြောချင်တော့ဘူး…
အော်..mandalaygazette မှာမင်းလိုလူမျိူးရောက်နေတာ သိက္ခာကျ တယ် …..
THET PAINH says:
ဟေ့ကောင် …….. ပထွေးအားကိုးနဲ့ဟောင်မနေနဲ့ ။နူနေတဲ့မင်းရဲ့ လက်ကမောက်စ်တောင်ကိုင်နိူင်ရဲ့လား?။ ဘာလဲ မင်းအမေနဲ့ ညီမ(တစ်မိူးလုံး) ကို မင်းကိုယ်တိုင် ဒေါင်းလော့လုပ်နေကျလား?။ ဒါမှမဟုတ်သူများတွေလုပ်တာမြင်လို့ အကျင့်ဖြစ်သွားတာလား …..။
if you can.,
please hack to me.
အော်…… မောင်လေး အမ မရိုင်းချင်ဘူး ။စကားပုံရှိတယ် ‘သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ ” ။ ငါ့ကို ၃၀၀ ရာ မက်နေတယ်လို့ထင်လား… .ထင်တာပြောရရင်တော့ နင့်အသိုင်းဝိုင်းမှာ ၃၀၀ဆိုတဲ့စကားကပြောနေကြဖြစ်နေလို့ အကျင့်ပါနေတာလား…ဟင် ။ နင်ပေးမဲ့ ၃၀၀၀ ဆိုတာ ငါ့အတွက် ရီစရာဘဲ နင့်တစ်မိူးလုံး ခွက်ဆွဲ ပြီး ငါ့အိမ်ရှေ့လာခဲ့လို့ရတယ် ။ တကယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်နော်..။ တော်ရုံလူဆို မောင်းထုတ် ပစ်တာ…။
မိမိစာ မိမိ ပြန်ဖတ်ရဲ့လား။ “ခင်ဗျားတို့ ဖျက်ရင်လည်း ကျွန်တော် Script ဖမ်းထားတယ်။ ပြန်တင်မယ်။” မင်းပြောလို့ script ဆိုတာ ၀င် ပြောတာ။ DDos ဆိုတာ ရှင်းပြပေးရမှာ လား။ သိချင်လဲရှင်းရှင်းပြောပေါ.ကွာ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack ၀င်ဖတ်ကြည့်လိုက်။
willam mail ကတော့ myanmarteleport@gmail.com ပါ။
မိမဆုံးမဖမဆုံးမကောင်vvpeople ရေ …..ဘာလဲမင်းပထွေးကမင်းကိုအဲလိုပြောဖို့သင်ပေးထားတာလား….
FUCK .YOU .vvpeople says:
son ofabitch….vvpeople
သနားလို့..ငါတို့ကအများကြီးမင်းကတယောက်တည်းဆိုတော့..မင်းရဲ့စအိုပွင့်သွားမှာစိုးလို့ကွ ..ကြားလား ခွေးသားရဲ့..
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုခွင်.ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အသုံးအနှုန်းတွေယဉ်ကျေးဖို့ လိုပါတယ်
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုခွင်.ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် စည်းမဲ.ကမ်းမဲ.ရေးသားပြောဆိုတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး
အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ စာလုံးနဲ့ေ၇းတာဖြစ်လို့ မျက်နှာကိုမမြင်ရလို့ ပြောတဲ့သူဘယ်သူဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိရ မတွေ့ ရပေမယ့်ဒါလည်းတစ်နည်းပြောရင်လူအများကြားစကားပြောကြသလိုပါပဲ။
မိုက်ရိုင်းတာ ၊ညစ်ညမ်းတာ ၊ရုန့် ရင်းကြမ်းတမ်းတာ၊ အသားလွတ်ထိခိုက်စော်ကားတာတွေကိုတော.ရှောင်ရှားသင်.ပါတယ်။
ခွေးရဲ့သား vv people says:
မင်းအမိူးတွေများနေတာကို ဒီမှာလာကြွားရလားကွ။ ဒါကလူကောင်းတွေစုတဲ့နေရာကွ။ များနေရင်လဲ အလကားရတာဘဲ ငါ့မှာဘော်ဘော်တွေအများကြီးရှိတယ် ဘာမှမပူနဲ့ ….။ အင်း ……မင်းအမိူးတွေကလဲအင်တွေကြီးနေမှာ …so….
shwemanmay ပြောတာဟုတ်တယ် အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ် အပေါ်ကစာတွေကိုဘဲကြည့်တော့ ………..မန်းကလေးနဲ့လည်းပြိုင်ပြောနေတယ် အပေါ်ဆုံးမှာ ဘာတွေသူအတွက်ထိခိုက်တာဘာပါနေလို့လဲ ။ဒါသက်သက် mandalaygazette ကိုရူတ်ချနေတာ ။ အယ်ဒီတာ ရေ…………..
ရွှေမန်းမေ နဲ့ ကိုပေါက် မန္တလေး ကလွဲရင် အားလုံး ကျွန်ပါးဝနေလိုက်ကြတာ။ အဟတ်ဟတ်။ အဲ… ငါ့ကို ကြောက်တဲ့ သူတွေတောင် ၂၁ ယောက် ကျော်နေပြီပဲ။ ကဲ.. ကျွန်အပေါင်းတို့ .. မကြာခင် နင်တို့ ချစ်တဲ့ နင်တို့ သခင်သတင်းစာ ကြီး ပထမ တစ်ခေါက်လို ဗြောင်းဆန်သွားတော့မှာပါ။ ကိုယ့်ဆရာတို့ ဘက်ကပ် လုပ်ထားပါ။ ဟို့စ်တင်း အသစ် အဆင်သင့် ၀ယ်ထားပါ။ ကျွန်အပေါင်းတို့ .. သခင်အပေါ် ထပ်ဖါးနိုင်ကြပါစေ။
Proxy – http://whatismyipaddress.com/ip/212.116.220.149
– vvpeople အမည်ရှိမင်န်ဘာသည် အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတခုဖြစ်သော ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား မှ ပရော့စီဆာဗာ (prange149.awalnet.net.sa )ကို ကြားခံသုံးပြီး ယခုဝက်ဆိုက်ကို (Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 ) ဖြင့်ဝင်ေ၇ာက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
– အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများတွင် အထူးစောင့်ကြည့်အဆင့်ထားသော အရှေ့ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံမှဆာဗာအသုံးပြုပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် သတင်းဌာန၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ခြိမ်းခြောက်ေ၇းသားမှုများကိုလည်း အထက်ပါစာများအရ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
– vvpeople အမည်ရှိမင်န်ဘာသည် အခြားရေးသားနေသူ မန်င်ဘာများ စိတ်အနှောက်ဖြစ်အောင်လည်း တိုက်ခိုက်ရေးသားမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို အမှတ်ပေးစံနစ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
– အဆိုပါ vvpeople အမည်ရှိမင်န်ဘာ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်၏ လုံခြုံရေးအဆင့်အနည်းငယ်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းများ ပြုစုရခြင်းအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ နှင့် သတင်းဌာန၏ ဂုဏ်သိက်ခါအရ နစ်နာမှု အချို့ စတင်ရှိနေကြောင်း တရားဝင်အသိပေးလိုပါသည်။
– ထို့ ကြောင့် ယခုကဲသို့ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်အား အက်ဖ်ဘီအိုင်သို့ သတင်းမပို့ မှီ vvpeople အမည်ရှိ မင်န်င်ဘာအား ပထမအကြိမ် သတိပေးအပ်ပါသည်။
– ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရေးသားမှုများ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်အား တိုက်ခိုက်မှုများ တွေ့ရှိရပါက မှတ်တမ်းအားလုံးအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုကာ Google Inc. (NASDAQ: GOOG, FWB: GGQ1) သို့ လွှဲပေးပြီး ၄င်း၏ GMail account (vivacious.people@gmail.com) အား ပိတ်ပစ်ကာ အသေးစိတ်စိစစ်နိုင်ရန် တရားဝင်တောင်းဆိုမည်လည်းဖြစ်ပါသည်။
– အသုံးပြုနေသူများ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်းအတွက် myanmargazette.net ကိုယ်စား တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
U.S. sites interested in an investigation ofadenial-of-service attack can contact their local FBI field office for guidance and information. For contact information for your local FBI field office, please consult your local telephone directory or see the FBI’s contact information web page:
မြန်မာနိုင်ငံမှ လည်း users များစွာမှ ယင်း proxy ကို ကျော်ရန်ခွရန် အသုံးပြုနေကြောင်းပါ။
vvpeople ပို့စ်တင်ပြောထားတာ မှန်သင့်သလောက်လည်း မှန်ပါတယ်။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း စကပ်တိုတာမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပဲ ဆွဲထည့်လာတာတွေက တော်တော်လွန်ပါတယ်။
သူတဦးတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို တဦးတယောက်က ဝေဖန်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒါမျိူးပြောဆိုတိုက်ခိုက်ကြရင် ဘယ်တော့မှ မပြီးတဲ့စစ်ပွဲတွေပဲ လာတတ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ကြမှာပါ။
သူတဦးတယောက်ဟာ …တခြားတယောက်၊တဖွဲ့ ၊တစုကို ..ဘာသာရေးယုံကြည်မှု့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စော်ကားပြောစရာအကြောင်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အေ၇းရှိ၇ပါတယ်။
ဘာအကြောင်းနဲ့မှ တဦးကို တဦးက ဆရာလုပ်ခြင်း၊နှိမ်ချခြင်း၊ စော်ကားခြင်း မပြုသင့်ပါ။ ယူအက်စ်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာကိုက“All Men Are Born Free and Equal”လို့ ပြဌာန်းထားတာမို့ ..ဒါဟာ တဦးနဲ့တဦး တန်းတူဆက်ဆံရေးအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုကော်မန့်တွေကို က မန္တလေးဂေဇက်အနေနဲ့ မဖျက်ပဲထားတာမို့ တိုင်ကြားပြောရင်း… ကြားထဲက စာတွေစိစစ်တာမရှိပဲ တင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ မီဒီယာကို ဒေါသထွက်မိတာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီကနေ ပိုထိရောက်အောင်ခြိမ်းခြောက်တာပါ ထည့်ရေးမိလိုက်ဟန်တူပါတယ်။
သူလည်းမြန်မာနိုင်ငံထဲကသူမို့အားလုံးကျော်ခွသုံးကြရတဲ့ ဆာဗာကိုယူသုံးလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေရိကမှာက ခုတလော အကြမ်းဖက်တာတွေ ခပ်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေတာမို့ ဆိုင်ဘာနဲ့ပါတ်သက်တာတွေအတွက် အထူးအဆင့်လုံခြုံရေးတွေမြှင့်ထားချိန်မှာ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်က သွားတိုင်လိုက်ရင် ကြားညပ်သွားနိုင်တာမို့မတိုင်တန်းခင်သတိပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများသဘောမတူရင် မကြိုက်ကြရင် ထိုင်မနေကြပဲ ကျော်ဖတ်မနေကြပဲ လက်တွေ့ကျကျ အနှုတ် ၀ိုင်းပေးကြစေလိုပါတယ်။ မကြိုက်တာကို ဘယ်တော့မှ သည်းခံမနေကြပါနဲ့။ မကြိုက်ကြောင်း လက်တွေ့ကျကျ ပြပါ၊ လုပ်ပါ။
အခု ကျုပ်ရေးတဲ့စာတွေလည်း မကြိုက်ရင် ဖြုတ်ဖို့ အနှုတ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါဆို ဖြုတ်ပေးမယ်ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ vvpeople ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ မူတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် vvpeople ကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း အယ်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့ ပြောပါရစေ။
အင်း vvpeople တော့မသိဘူး ဖတ်ရတဲ့သူတောင် အားနာလာတယ်။ ဒီလောက်ပြောပြီးမှတော့ ခွင့်လွတ်လိုက်ကြပါတော့။ kai ပြောသလို အဆိုးထဲကအကောင်းလို့ဘဲ သဘောထားပြီး Rating လိုက်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့။ web evelopment ကိုလေ့လာနေတာဆိုတော့ DDos တို script ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါတော့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဗဟုသုတတိုးပါတယ်။ DDos အကြောင်းလေးလေ့လာလိုက်အုံးမယ်။ ဒါနဲ့ဘယ် post ကနေစတင်ဖြစ်ကြတာလဲ သိချင်ပါတယ်။ script ဖမ်းတဲ့အကြောင်းလေးလဲ သိတဲ့သူများ post ရေးတင်ပေးကြပါလား။
Distributed Denial Of Service (DDOS) နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့တယ်လည်းစွာပါလား။ဟဲဟဲ အသိပညာနဲနဲလေးနဲ့လုပ်တာပိုတောင်အန္တရယ်များမယ်ထင်တယ်ကို့လူ။ DDOS နဲ့ DOS ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်
ဆိုတာကောသိလို့လား။ mandalay gazette ကိုလည်းပညာရှင်တွေနဲ့ဘဲဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဲတတ်တယ်လို့အထင်မကြီးနေနဲ့သိလား။ တစ်တောင်ထက်တစ်တောင်ကတော့မြင့်တာပါဘဲ။
ဖါးတုလို့ခရုခုန် ဖင်ကျိုးရုံဘဲဖြစ်မယ်သိလား။ မသိသေးရင်လည်းမှတ်ထား။ ကိုယ့်အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်ရင် http://www.hackthissite.org မှာသွားပြီးတော့ ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်စမ်းကြည့်။ အဲ့ဒါမှကိုယ့်အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိသွားမယ်။